Flax (နှမ်းကြတ်ပင် ) - Hello Sayarwon
Flax (နှမ်းကြတ်ပင် )
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Flax (နှမ်းကြတ်ပင် )
Flax (နှမ်းကြတ်ပင် ) ကဘာလဲ။
နှမ်းကြတ်ပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Flaxseed ကို အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ဝမ်းဆက်တိုက်ချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားဆေး အသုံးများသောကြောင့် အူပျက်စီးခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အူမကြီး နံရံရောင်ခြင်း၊ IBS၊ အူမကြီးနံရံမှာ အနာများရှိခြင်း၊ အစာအိမ်နံရံ ရောင်ခြင်းနဲ့ အူသိမ်ရောင်ခြင်းတို့မှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Flaxseed ကို နှလုံးနဲ့ သွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ကော်လက်စထရောများခြင်း၊ သွေးကြောခဲခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်းနဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါတွေမှာလဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Flaxseed ကို ဝက်ခြံအတွက်၊ ADHD ရောဂါ၊ SLE ရောဂါသည်တွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ သွေးဆုံးတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ရင်သားနာကျင်မှုတွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ သူ့ကို ဆီးချို၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ HIV၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ဆီးအိမ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ငှက်ဖျားနဲ့ အဆစ်ရောင်ရောဂါတွေမှာလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
လည်ချောင်းနာခြင်းနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း အတွက်လည်း သုံးကြပါတယ်။
လူအချို့က အရိုးပွရောဂါ ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ရင်သားကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတို့ကို ကာကွယ်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
Flaxseed ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ဟာ Equol လို့ခေါ်တဲ့ Flaxseed မှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါယတ်။
Flaxseed ဟာ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝပြီး omega3fatty acid ပါဝင်ပါတယ်။ Flaxseed ပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်ဟာ အဓိကအားဖြင့် အစေ့ခွံမှာ ပါဝင်တာဖြစ်ါတယ်။ အစာမစားခင် စားသုံးပေးခြင်းဟာ ဆာလောင်မှုကို ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
နှမ်းကြတ်ပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Fatty acid တွေ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ဖု့ိ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
Flaxseed အစိမ်းတွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ အဆိပ်သင့်နိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ ဆေးများခြင်း လက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်သင့်ပြီး ဖြစ်လာခဲ့ရင် Flaxseed သုံးစွဲခြင်းကို ရပ်တန့်ကာ အခြားကုသမှု ယူသင့်ပါတယ်။
Flaxseed ဟာ သွေးသကြားပမာဏကို ကျစေပြီး ဆီးချိုဆေးအချို့ရဲ့ အာနိသင်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။ သင့်မှာ ဆီးချိုရောဂါရှိပြီး Flaxseed စားသုံးနေတယ်ဆိုရင် သင့်သကြားပမာဏကို သေချာ စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Flaxseed ဟာ estrogen လိုမျိုး အစွမ်းရှိတာကြောင့် ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ အချို့အခြေအနေတွေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကတော့ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ရောင်ခြင်းနဲ့ သားအိမ်အလုံးတည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Flaxseed ဟာ အောက်သွေးကို ကျစေပါတယ်။ Flaxseed ဟာ သွေးပေါင်ကျနေတဲ့ လူတွေမှာလည်း သွေးပေါင်ကို ထပ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
နှမ်းကြတ်ပင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ ကလေးနို့တိုက်မိခင်တွေမှာ Flaxseed ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Flaxseed ကို အူပိတ်နေသူတွေ၊ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်သူတွေ၊ ဓါတ်မတည့်မှု ရှိတတ်သူတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အနာအုံဆေးကို ပွင့်အာနေတဲ့ အနာတွေအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Flaxseed ဟာသွေးခဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ သွေးရောဂါ ရှိရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
နှမ်းကြတ်ပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အောက်ပါ ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
•	ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် မရှိခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ လေတက်ခြင်း
•	အားနည်းခြင်း၊ မောခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ အကြောသေခြင်း၊ တက်ခြင်း။
နှမ်းကြတ်ပင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
နှမ်းကြတ်ပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဆီးချို အမျိုးအစားနှစ်အတွက်: 600 mg တစ်နေ့သုံးကြိမ်,
ကော်လက်စထရောများခြင်း: Flaxseed ပါတဲ့ ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့် (40-50 grams flaxseed)
SLE လူနာတွေမှာ ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်းဆောင်တာ တိုးတက်ဖို့အတွက်: စီရီရယ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ လိမ္မော်ရည်တို့နဲ့ အတူ 15 grams of ground flaxseed တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်
သွေးဆုံးလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေရန်: 40 grams ကြိတ်ထားတဲ့ Flaxseed ပါဝင်တဲ့ ပေါင်မုန့် ကို နေ့စဉ် စားသင့်ပါတယ်။
Flaxseed ကို သောက်သုံးရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
နှမ်းကြတ်ပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Flaxseed ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
•	Softgel capsules
Print version. Page 269.
Flaxseed. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 991-
flaxseed.aspx?activeingredientid=991&activeingredientname=flaxseed. Assessed August 7, 2016.
Flax. http://www.drugs.com/sfx/flax-side- effects.html. Assessed August 7, 2016.Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001.
Flax.http://www.drugs.com/sfx/flax-side- effects.html. Assessed August 7, 2016.